ဝက်ဘ်ဆိုက် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ
အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဈေးဝယ်ခြင်း (စီးပွားရေးလုပ်ငန်း) ဝက်ဘ်ဆိုက် သဘောတူညီချက်များ
ဤဆိုက်တွင် Inhon အုပ်စု (ဤစာချုပ်နောက်ပိုင်းတွင် Inhon ဟု ရည်ညွှန်းသည်) မှ ထောက်ပံ့ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ပရိုဂရမ်နှင့် အခြားသတင်းအချက်အလက်များ အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်သည်။
သင်သည် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ (ဤစာချုပ်နောက်ပိုင်းတွင် သဘောတူညီချက်များဟု ရည်ညွှန်းသည်)၊ ရပိုင်ခွင့်များ၊ စာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်များ၊ စည်းကမ်းများနှင့် ကတိကဝတ်များအားလုံးကို ဖတ်ရှုပြီး နားလည်သင့်သည်။ တပ်ဆင်ရန်၊ မိတ္တူပွားရန်၊ ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန်၊ ဝင်ရောက်ရန်၊ ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဤဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းတို့ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် သင်သို့မဟုတ် သင်၏မိဘများ (သို့မဟုတ် တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူများ) သည် ဤနောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သဘောတူညီချက်များကို သဘောတူ လက်ခံသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဒုတိယမြောက် ဆက်စပ်သူဖြစ်လျှင် သင်၏ မိဘများ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူများသည် ဤဝေါဟာရများရှိ ရပိုင်ခွင့်များ၊ စာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် သဘောတူညီချက်များကို ဖတ်ပြီး နားလည်ပြီးနောက်တွင် ၎င်းတို့သည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သို့မဟုတ် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုခြင်းအား ဆက်လက်အသုံးပြုရန် မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြချက်ကို သင်သည် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နားလည်ပြီး သဘောတူသည်။
1. ၁။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် မည်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲမဆို ဒေါင်းလုပ်ဒ်ရယူခြင်းကို လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လျော်ညီစွာ အသုံးပြုရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ဆက်စပ်နေသော ထောက်ပံ့ပေးမှုများသည် ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ထားသော ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အတူ ထောက်ပံ့သည် သို့မဟုတ် ယှဉ်တွဲပါသည်ကို သင်နားလည်သဘောပေါက်ရန် ဖြစ်သည်။
2.၂။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၎င်းဝန်ဆောင်မှုများသည် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် သီးခြားရှိနေသော ဟဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ပလက်ဖောင်းများနှင့်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို သင်နားလည် သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုသည် သင့်လျော်သော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟဒ်ဝဲနှင့် ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှု၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်ကို သင်သေချာပါစေ။
3. ၃။ ဤဆိုက်ရှိ အချို့ အကြောင်းအရာများသည် စာချုပ်တွင်မပါသော အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ ထောက်ပံ့နိုင်ပြီး ဤဆိုက်သည် သင့်အား အခြားအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို လမ်းညွှန်နိုင်သည်ကို သင်နားလည် သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအခြားအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ သဘောတူညီချက်များနှင့် ပတ်သက်သော စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူရန် သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သင်နှင့် အခြားအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြား သဘောတူကတိစာချုပ်များ အားလုံးကဲ့သို့ Inhon မပါဝင်ဘဲ အခြားအုပ်စုမှ ကြေငြာခဲ့သော စည်းကမ်းချက်များနှင့် ထောက်ပံ့ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်သဘောတူ ဆုံးဖြတ်သည်။
4.၄။ သင်နှင့် Inhon အကြား ရေးသားဖော်ပြထားသော သဘောတူညီချက် ထောက်ပံ့ထားခြင်းမရှိဘဲ ဤသဘောတူညီချက်များသည် သင့်အား Inhon ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအမည်များ၊ ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်အသားများနှင့် ကိုယ်စားပြုသောအရာများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော အမှတ်အသားများအား အသုံးပြုရန် အခွင့်အရေးကို အာမခံချက် မပေးသည်ကို သင်နားလည်သဘောပေါက်သည်။
5.၅။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရန် အလို့ငှာ သင်သည် အင်တာနက် အသုံးပြုသော အပြုအမူနှင့် စည်းကမ်းကို လိုက်နာပြုမူဆောင်ရွက်မည်ကို သင်နားလည်သဘောပေါက်သည်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ်ထားသော အပြုအမူသည် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အကန့်အသတ်မရှိသော အရာများ ပါဝင်သည်။
A. က။ ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့ခြင်း
B. ခ။ ကွန်ရက် သို့မဟုတ် ကွန်ယက်ရင်းမြစ်သို့ မည်သည့်ကြားဝင်ခြင်း၊ ကျူးကျော်ခြင်းနှင့် ဖျက်ဆီးခြင်း အပြုအမူများ
C. ဂ။ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုမှု၊ ပိတ်ဆို့မှု၊ ညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် အများပြည်သူကို ဒုက္ခပေးမှု အချက်အလက်များကူးပြောင်းခြင်း
6. ၆။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော စာမျက်နှာတွင် တင်ပြထားသော ဤသဘောတူညီချက်များနှင့် အခြား Inhon ၏ အသုံးပြုမှုစံများ၊ သဘောတူညီမှုများနှင့် သင့်သဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များသည် ဤသဘောတူညီချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်ကို သင်နားလည်သဘောပေါက်သည်။ သင်သည် ကာလ အပိုင်းအခြား တစ်ခုအထိ ဤသဘောတူညီချက် သေချာစေရန် လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည် သင်၏ အခွင့်အရေးများနှင့် စာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်များကို သင်နားလည် သဘောပေါက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု Inhon က အကြံပြုထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤသဘောတူညီချက်များနှင့် ဆက်စပ်ဥပဒေအရ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် သင်သဘောမတူညီလျှင် သင်သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းရမည်။
7. ၇။ သဘောတူညီချက်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ကိုယ်စားပြုရန် အခြေခံအဖြစ် ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ သဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် ဤသဘောတူညီချက်များ၏ အီလက်ထရောနစ် ဗားရှင်းကို သင်သဘောတူသည်။
ဤသဘောတူညီချက်များအရ Inhon သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုရန်အတွက် ကန့်သတ်ထားသော၊ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ဆိုင်သော၊ အကျိုးအမြတ် အဓိကမထားသော၊ ချန်လှပ်မထားသော၊ လွှဲပြောင်း၍ မဖြစ်နိုင်သောလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ငွေကြေးပေးရန် မလိုခြင်း၊ အခွင့်အရေးများကို သင့်အား အာမခံချက်ပေးသည်။ ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသော ကြိုတင်ဖော်ပြထားသော ခွင့်ပြုချက်များနှင့် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးများမှလွဲ၍ ဤသဘောတူညီချက်များသည် သင့်အား အခြားခွင့်ပြုချက်များအတွက် လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အာမခံခြင်း မပြုလုပ်ပါ။ Inhon သည် Inhon အားလုံးနှင့် သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် တရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများအတွက် အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ပါဝင်သည့် ဝက်ဆိုက်ဘ်၏ အခွင့်အရေး အပါအဝင် အခြားသော အခွင့်အရေးများကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
(1) ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် မှတ်ပုံတင်သောအခါ သင်ထောက်ပံ့ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်သည် မှန်ကန်၊ တိကျ၊ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီဖြစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံခြင်းအတွက် သေချာရမည်။ သင်သည် အထက်ပါ သတင်းအချက်အလက်များ နောက်ဆုံးပြုလုပ်ရန်နှင့် ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဤဝန်ဆောင်မှုကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်သည်။
(2) သင်သည် ပြင်ဆင်ရန်၊ အသုံးပြုရန်နှင့် သင်မှတ်ပုံတင်ထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို မွမ်းမံရန်အတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှတဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သုံးစွဲရန်အတွက် အသုံးပြုသောအမည်နှင့် စကားဝှက်ကို သင်အသုံးပြုရမည်။ သင်၏ အကောင့် စကားဝှက်၊ အသုံးပြုသောအမည်နှင့် လျှို့ဝှက်စွာ စီမံ အသုံးပြုခံရသော သင့်အကောင့်၏ မည်သည့် အသုံးပြုမှုမဆို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် သင့်တစ်ယောက်တည်းတွင်သာ တာဝန်ရှိသည်။ Inhon သည် ဤကိစ္စအတွက် မည်သည့် တာဝန်ရှိမှုမျှ ပါဝင်မည် မဟုတ်ပါ။
(3) မည်သည့်အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်သော ဖော်ပြချက်ကိုမဆို ဖယ်ရှားခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ခြင်း၊ ဖတ်ရခက်ခဲစေရန် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ရန်နှင့် မည်သည့် အချက်အလက် ချိတ်ဆက်လမ်းကြောင်းမှတဆင့်ဖြစ်စေ အကယ်၍ ဖော်ပြချက်များအား အတူပါလာခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ထားခြင်းကို လစ်လျူရှုရန် သင်သဘောတူသည်။
(1) ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်သော နှစ်ရက်အတွင်း အမှာစာတစ်ခုကို ငြင်းပယ်ခြင်းအတွက် ချွင်းချက်အနေဖြင့် Inhon မှ ပံ့ပိုးထားသော တရားမျှတခြင်းသည် သင်၏ အမှာစာသည် Inhon မှ လက်ခံပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ အမှာစာ ငွေပေးချေခြင်းသည် အပြည့်ပေးပြီးသောအခါ အမှာစာသည် အငြင်းပွားဖွယ်မရှိ စဉ်းစားခြင်း ခံရသည်။
(2) အကယ်၍ လိုအပ်လျှင် Inhon သည် အမှာစာ တစ်ခုစီအတွက် ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူမှု ပမာဏကို အများဆုံး သတ်မှတ်ချက် ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏ အမှာစာတွင် ဖော်ပြသောအခါ ဤ အများဆုံး သတ်မှတ်ချက်ကို သင်ကျော်လွန်လျှင် Inhon သည် အမှာစာကို အခြေခံ၍ အများဆုံး ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပေးပို့လိမ့်မည်။
(3) သင်၏ တစ်ဦးချင်း ဝယ်ယူသော အပြုအမူပုံစံနှင့် အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် Inhon မှ ပံ့ပိုးပေးထားသော ထောက်ပံ့မှုအတွက် ကျေးဇူးပြုပြီး ဆက်စပ်သော အရောင်းအဝယ် မူဝါဒများကို ရည်ညွှန်းပါ။
(1) ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Inhon နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော အချက်များအောက်တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တရားမဝင် ဝင်ရောက်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် သြဇာလွမ်းမိုးမှု စသည်တို့ အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်မှုကြောင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ အကျယ်ချဲ့ထားသော ခွင့်ပြုချက်အရ ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် သက်ရောက်မှုသည် လုံခြုံခြင်း၊ သင့်လျော်ခြင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အပြုအမူဖြစ်ခြင်းတို့အတွက် Inhon သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အခွင့်အရေးကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ငြင်းဆိုရန်၊ ရပ်ဆိုင်းရန်၊ မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်နှင့် ဆိုင်းငံ့ရန် ချွင်းချက်အနေဖြင့် ချန်ထားသည်။
(2) သင်ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် Inhon က ရပ်စဲသည့်တိုင်အောင်အထိ သဘောတူညီချက်များသည် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သင်သည် ဤသဘောတူညီချက်ရှိ သဘောတူညီမှုများ ဆောင်ရွက်ရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါက ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုရန် သင်၏ အခွင့်အရေးများသည် သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ အလိုအလျောက် ရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည်။ ဤသဘောတူညီမှုများ ရပ်ဆိုင်းခြင်းအပေါ်တွင် သင်သည် ဤဆိုက်အား အသုံးပြုခြင်းအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် ဤဆိုက်အား ကူးယူခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်သင့်သည်။
စာချုပ်တွင် မပါဝင်သော အခြားအဖွဲ့များမှ ထောက်ပံ့ပေးသော အကြောင်းအရာများ
(1) ဤဆိုက်တွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ အခြားအဖွဲ့များတွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် ချိတ်ဆက်မှု လမ်းကြောင်းများမှတဆင့် သုံးနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးသည် လက်ရှိ အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော ဥပဒေများအားလုံးနှင့် နိုင်ငံတကာ သဘောတူ စာချုပ်များအပေါ်တွင် မူတည်သည်။
(2) အကယ်၍ သင်သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုအား တနည်းနည်းဖြင့် အမှန်တကယ် သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည့် သဘောတူစာချုပ် ဖောက်ဖျက်ခြင်းကို သိလျှင်သော်လည်းကောင်း ဥပဒေအရ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်နေသော စည်းမျဉ်းများအရ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း သတိပေးချက်နှင့် လိုအပ်သော ဤသဘောတူညီချက်များအရ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ (ဤစာချုပ်နောက်ပိုင်းတွင် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာဟု ရည်ညွှန်းဖော်ပြသည်) သတင်းအချက်အလက်ကို ထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် Inhon ဖြေရှင်းပေးသော ဌာနမှ သတိပေးချက်ကို လိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ Inhon သည် ဥပဒေနှင့် လျော်ညီစွာ လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို လုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
(3) ဥပဒေနှင့်လျော်ညီစွာ Inhon သည် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်၏ သတိပေးချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ဖောက်ဖျက် ကျူးကျော်ခြင်း ခံရသော အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများရှိလျှင် ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ သုံးစွဲရန် သင်၏ အသုံးပြုမှု အခွင့်အရေးသည် ဖယ်ရှားခံရခြင်း သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် သုံးသပ်ခံရခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း မရှိဟု သင်ယုံကြည်လျှင် သင်သည် Inhon ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာတွင် သိသာထင်ရှားစေရန် အသိပေး အကြောင်းကြားစာကို ပုံမှန်နည်းပဒေအတိုင်း တုံ့ပြန်ပေးရန် လိုက်နာရမည်။ Inhon သည် ဥပဒေနှင့် လျော်ညီစွာ လုပ်ဆောင်မှု အားလုံးကို လုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေငြာချက်နှင့် တာဝန်ရှိမှု ကန့်သတ်ချက်
(1) သာမန် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ ကွန်ပျူတာစနစ်သည် အကျိုးအမြတ် ရရှိစေရန် သင့်လျော်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတို့ဖြင့် သေချာစွာ ချဲ့ထွင်လိမ့်မည်။
(2) Inhon သည် အောက်ပါ အခြေအနေများအရ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်ပွားမှုအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသောအခါ သင်သည် ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုခြင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ ပရိုဂရမ်အမှား၊ မှားယွင်းသော သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အမှားများ သို့မဟုတ် ဖော်ပြပါ မည်သည့်အခြေအနေမဆို ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သော ပေါ့ပေါ့ဆဆ ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကြားဝင်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အမှား သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးခြင်း၊ ဝါယာကြိုး၊ တယ်လီဖုန်းနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းများကြောင့်ဖြစ်ခြင်း၊ ဂြိုဟ်တုထုတ်လွှတ်မှုတွင် ကြားဝင်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိစ္စများ သို့မဟုတ် ကွန်ယက် ဝက်ဘ်ဆိုက်လိုင်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းများ၊ ခိုးမှုနှင့် ပတ်သက်သော အထောက်အထားများ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် တရားမဝင် နည်းဥပဒေကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် မွမ်းမံခြင်းများ အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်ခြင်းသည် ကွန်ပျူတာပစ္စည်းကို ပျက်စီးမှု ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။
ဤဆိုက်ရှိ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် လက်ရှိအခြေအနေအရ ဖော်ပြခြင်းခံရမှုအောက်တွင် ထောက်ပံ့ထားသည်ကို သင်နားလည်သဘောပေါက်သည်။ သင်သည် အကန့်အသတ်မရှိ လိုအပ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု စရိတ်များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် အပါအဝင် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ အရည်အသွေးနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေအရ အကျယ်ချဲ့ ခွင့်ပြုချက်အတွင်း Inhon သည် ဈေးကွက်ရှိ အာမခံချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုစီအတွက် အသုံးချမှု၊ အခြားသူများအတွက် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းအပေါ် အခွင့်အရေး၊ အသုံးပြုခြင်းခံရသော ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက် အာမခံမှု သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ရရှိသော မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်မဆိုနှင့် ပတ်သက်သော တိကျမှုနှင့် အားထားနိုင်မှုအတွက် အာမခံချက်များ သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြည့်ရှုခြင်း၏ ရလဒ်များစသည်ဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်သော ဤဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဤသဘောတူညီချက်များအတွက် အတိအလင်း ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် သက်ရောက်မှု ရှိစေခြင်းအတွက် မည်သည့်အာမခံချက်နှင့် အာမခံထားမှုကိုမဆို ထောက်ပံ့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
(4) သင်သည် ဤဆိုက်အား အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဤဆိုက်နှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံး၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို ခံနိုင်ရည် ရှိရမည်။ ဤသဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် ဤဝက်ဘ်ဆိုက် အသုံးပြုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Inhon ပါဝင်ခြင်း မရှိစေရန် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်သောအခါတွင်ဖြစ်စေ ထို့ကြောင့်မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းမဆို သို့မဟုတ် တဆင့်ခံရရှိသောအရာနှင့်မဆိုဖြစ်စေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်သော တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်သော၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်သော အရေးပါသော ပြင်းထန်သော သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် ပျက်စီးမှုများမဆို (ကန့်သတ်ချက်မရှိသော ပါဝင်မှုများဖြစ်သည့် အကျိုးအမြတ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ စီးပွားရေးကြားဝင်ခံရခြင်း၊ အချက်အလက်ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှု) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုဖြစ်ပွားခြင်းအတွက် Inhon သည် အကြံပေးခံရခြင်းရှိလျှင် လျစ်လျူရှုပြီး Inhon ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့ဝင်များ၊ အသီးသီးသော အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများမှ သင့်အား တာဝန်ယူရန် မလိုအပ်ခြင်းကို သင်ကောင်းစွာ နားလည်သဘောတူသည်။ အချို့နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများတွင် တာဝန်ရှိမှုအားလုံးနှင့် ပတ်သက်သော ကင်းလွှတ်ခွင့်နှင့် အထက်ဖော်ပြပါ တာဝန်ရှိမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုအတွက် တာဝန်ယူမှု ကန့်သတ်ချက်များသည် ခွင့်ပြုခြင်း မခံရပေ။ ထို့ကြောင့် အထက်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သော ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ချွင်းချက်ထားခြင်းများသည် သင့်အား သက်ရောက်မည် မဟုတ်ပါ။
သဘောတူညီချက်များ၊ အခြားဥပဒေများနှင့် မည်သည့်ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သို့မဟုတ် ရပိုင်ခွင့်များမဆို Inhon ကို အမှီပြုသော အခြားအဖွဲ့၏ အခွင့်အရေးများကို ကျူးလွန်ပြီး သင်၏ စာချုပ်ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် သင်သည် Inhon နှင့် ၎င်းတို့၏ အသီးသီးသော လက်အောက်ခံအဖွဲ့များ၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့သူများ၊ ပံ့ပိုးသူများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ လိုင်စင်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့် မည်သည့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမဆိုရှိသော ဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်ရှိမှုများနှင့် အသုံးစရိတ်များ (ရှေ့နေခနှင့် ဥပဒေစရိတ် အပါအဝင်) နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သည် စောဒကတက်ခြင်းနှင့် ဒဏ်ငွေဆောင်ခြင်းကို သင်သဘောတူသည်။
Inhon သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ကာကွယ်ခြင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Inhon မှ တာဝန်ယူသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုအတွက် ပိုမို၍ လေ့လာလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ Inhon ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွင်ကြည့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် သဘောတူညီချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ အသုံးပြုပုံနှင့် အခြေအနေများကို ကောင်းစွာ နားလည်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ Inhon ဥပဒေရေးရာဌာန သို့ မှတ်ပုံတင်ထားသော စာ၊ ဖက်စ်၊ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။
အီးမေးလ် - IPL@inhon.com
ဖုန်း - 886-66007660
ဖက်စ် - +886-66007661